ကြှနျမ အရငျလို မပွုံးတတျတော့ဘူး – Shinyoon
လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲပွုံးခဲ့ဖူးတဲ့ နှုတျခမျးတှေ အသကျမဲ့သှားတဲ့အထိ ကြှနျမ နှလုံးသားတှဟောလဲ တဖွေးဖွေး မာကြောလာခဲ့ပွီ . ဘာကွောငျ့လဲ မမေးပါနဲ့တော့ အရငျလိုတော့ ကြှနျမ လှလှပပလေး မပွုံးတတျတော့ဘူး အသကျရှိတဲ့ လူသားတဈယောကျမှာ နှလုံးသားက အလိုလိုနရေငျး မာကြောသှားတာတော့ မဟုတျဘူးလေ …
တခြို့လူတှပေေးတဲ့ သင်ျခနျးစာပေါ့ … ဒါကိုပဲ ကောငျးကောငျးကညြှေကျခဲ့ပွီလို့ဆိုရမယျ ..အလှယျတကူလေး ယုံခဲ့ဖူးတဲ့ကောငျမလေး ခဏခဏအလိမျခံ အညာခံရတဲ့အခါ နောကျထပျယုံကွညျရမှာထပျပွီးကွောကျလာတတျတယျ ။ အခဈြကွောငျ့ နာကငျြခဲ့ဖူးတဲ့ကောငျမလေးက နောကျထပျ ထပျခဈြရမှာကို ကွောကျသှားတတျတယျ
ဒီလိုပါပဲ .. ကြှနျမ အခြိနျတှေ အကွာကွီးထိ ကိုယျ့ကို နာကငျြစတေဲ့အရပျမှာ ရပျနမေိရငျးက ကိုယျ့ပြျောရှငျမှုကို ကိုယျကိုယျတိုငျ စတေးပဈခဲ့တာလေ ။ ကြှနျမမှာ ခံနိုငျရညျအားမရှိတော့လို့လှညျ့ထှကျခဲ့ပမေယျ့ အရငျတုနျးက အပွုံးတှကေပျပါမလာခဲ့တော့ဘူးလေ …
ကြှနျမ ပွုံးနပေါတယျ ဒါပမေယျ့ အရငျတုနျးကလို လုံးဝမဟုတျတော့ဘူး .. အရငျတုနျးက ဘယျလိုပွုံးခဲ့ဖူးတာလဲ မမှတျမိတော့ထိ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပြောကျဆုံးနခေဲ့တာလေ … ဘာကွောငျ့လဲ မမေးပါနဲ့တော့ သခြောတာတဈခုကတော့ ကြှနျမ အရငျလို မပွုံးတတျတော့ဘူး
နှုတျခမျးတှဟော တဖွေးဖွေး အသကျမဲ့လာသလို နှလုံးသှေးတှဟောလဲ တဖွေးဖွေး အေးစကျလာပါပွီ ဒီထကျပိုပွီး မာကြောသှားဖို့ကလှဲလို့တခွားလမျးတှတေော့ ကြှနျမ ကိုယျတိုငျလဲ မမွငျမိဘူး မပြျောပဲ ပွုံးခဲ့ဖူးတဲ့ အခြိနျတှကေို တဈခါတဈလတေော့လဲ ပွနျလှမျးတယျ အခုခြိနျ အဲ့လို ပွုံးတတျသေးရငျတော့ ကောငျးမှာပေါ့ ။
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြုံးခဲ့ဖူးတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ အသက်မဲ့သွားတဲ့အထိ ကျွန်မ နှလုံးသားတွေဟာလဲ တဖြေးဖြေး မာကျောလာခဲ့ပြီ . ဘာကြောင့်လဲ မမေးပါနဲ့တော့ အရင်လိုတော့ ကျွန်မ လှလှပပလေး မပြုံးတတ်တော့ဘူး အသက်ရှိတဲ့ လူသားတစ်ယောက်မှာ နှလုံးသားက အလိုလိုနေရင်း မာကျောသွားတာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ …
တချို့လူတွေပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာပေါ့ … ဒါကိုပဲ ကောင်းကောင်းကျေညှက်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ် ..အလွယ်တကူလေး ယုံခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်မလေး ခဏခဏအလိမ်ခံ အညာခံရတဲ့အခါ နောက်ထပ်ယုံကြည်ရမှာထပ်ပြီးကြောက်လာတတ်တယ် ။ အချစ်ကြောင့် နာကျင်ခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်မလေးက နောက်ထပ် ထပ်ချစ်ရမှာကို ကြောက်သွားတတ်တယ်
ဒီလိုပါပဲ .. ကျွန်မ အချိန်တွေ အကြာကြီးထိ ကိုယ့်ကို နာကျင်စေတဲ့အရပ်မှာ ရပ်နေမိရင်းက ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်ကိုယ်တိုိင် စတေးပစ်ခဲ့တာလေ ။ ကျွန်မမှာ ခံနိုင်ရည်အားမရှိတော့လို့ လှည့်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် အရင်တုန်းက အပြုံးတွေကပ်ပါမလာခဲ့တော့ဘူးလေ …
ကျွန်မ ပြုံးနေပါတယ် ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကလို လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူး .. အရင်တုန်းက ဘယ်လိုပြုံးခဲ့ဖူးတာလဲ မမှတ်မိတော့ထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာလေ … ဘာကြောင့်လဲ မမေးပါနဲ့တော့ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်မ အရင်လို မပြုံးတတ်တော့ဘူး
နှုတ်ခမ်းတွေဟာ တဖြေးဖြေး အသက်မဲ့လာသလို နှလုံးသွေးတွေဟာလဲ တဖြေးဖြေး အေးစက်လာပါပြီ ဒီထက်ပိုပြီး မာကျောသွားဖို့ကလွဲလို့ တခြားလမ်းတွေတော့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လဲ မမြင်မိဘူး မပျော်ပဲ ပြုံးခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေကို တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ပြန်လွမ်းတယ် အခုချိန် အဲ့လို ပြုံးတတ်သေးရင်တော့ ကောင်းမှာပေါ့ ။